ब्रिजरटन्स - दुई सीजन पुष्टि भयो बेजिया
ब्रिजरटन्स: दुई सीजन अब पुष्टि भयो!
सुसाना Godoy | 27/04/2021 14:00 | समाचार
वर्ष २०२० बन्द गर्न ब्रिडर्टनहरू ठूलो सफलताहरू मध्ये एक हो। पहिलो सीजन माथिको वर्षको क्रिसमसमा प्रीमियर भयो, अझै महिनौं पछि उनीहरू अझै प्लाट र यसको मुख्य पात्रहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। तसर्थ, यस अवधिको कहानी को ठूलो सफलता पछि, यो दोस्रो किस्तको लागि मात्र पर्खनु सम्भव थियो।
निस्सन्देह, हामीले राम्रो टिप्पणी गरेको रूपमा यो अपेक्षित थियो, तर के हामी सायद हामीलाई यति धेरै मन पराउँदैनौं कि त्यो हो हेस्टिंग्सको ड्यूक लामो-प्रतीक्षित दोस्रो सत्रमा हुँदैन। हो, यो एक चूना र बालुवाको अर्को हो, त्यसैले हामीलाई थाहा छैन यो सबैले दोस्रो भागको सफलतालाई कसरी असर गर्छ, जसले शूटिंग शुरू गरिसक्यो।
1 नेटफ्लिक्स श्रृंखलाको दोस्रो सत्र कस्तो हुनेछ
2 जब ब्रिडर्टन सीजन २ आउँदैछ
3 ब्रिजरटनमा नयाँ अनुहारहरू?
4 ड्यूकलाई विदाई
नेटफ्लिक्स श्रृंखलाको दोस्रो सत्र कस्तो हुनेछ
स्पोयलरमा नजोडीकन, हामी स्पष्ट छौं कि एउटा आधारभूत ब्रशस्ट्रोक हो र हामी पहिलो सीजनको साथ प्रेममा थियौं त्यो प्रेम कहानी थियो। ड्यूक र डाफ्ने पूर्ण रूपमा प्रेममा परे र एकसाथ बस्नको लागि केहि अवरोधहरू ठोक्छन्।। तिनीहरूले धेरै समस्याहरू सामना गरे, जसमध्ये एक बच्चा थियो। तर हामी अरू केहि पनि अगाडि बढ्नेछैनौं, ती सबैको लागि जुन अहिले सम्म यो देखिएको छैन।
यस समयमा हामी मध्ये जो ती थियौं, हामीले यो सुन्दर कथा कसरी जारी रहन्छ भनेर जान्नुपर्दछ, तर यस्तो देखिन्छ कि त्यस्तो हुँदैन। नयाँ सत्र पहिलो को निरन्तरता हुने छैन, तर अब ब्रिजर्टन सदस्यहरु मा केन्द्रित हुनेछ र यो जेठो भाई हुनेछ। किनकी तपाईलाई पक्कै थाहा छ, ती पुस्तकहरुसंग सम्बन्धित छ। त्यसो भए हामी हेर्नेछौं कि हामी कसरी छाँटकाँट गर्छौं ताकि जवान ड्याफ्ने उनको ड्यूकका लागि उदास नहुन् र यसको विपरित। यस्तो देखिन्छ कि एन्थोनीले त्यो नेतृत्वको भूमिका लिने छ र हामीलाई नयाँ प्रेम र नयाँ कथाहरू वा रहस्यले खुशी पार्नेछ।
जब ब्रिडर्टन सीजन २ आउँदैछ
ब्रिडगरटन सिजन २ कहिले आउनेछ भनेर कुरा गर्न यो एकदमै चाँडो छ। यस फिलिम को फिल्में यस वसन्त शुरू भएको छ। हामीलाई थाहा छ कहिलेकाँही यस क्यालिबरको कथा शूट गर्न कत्ति गाह्रो हुन्छ के निश्चित छ जुन यस वर्ष २०२१ को अन्त्यसम्म वा २०२२ को सुरुसम्म हामीसँग ठूलो खबर हुनेछैन हाम्रो हात बीच। हो, यो उत्सुकताका साथ प्रतिक्षा गरिएको छ तर यसले हामीलाई पचाउनको लागि समय दिन्छ कि मुख्य पात्रहरू मध्ये एक अब सेटमा र भविष्यमा रिलीज हुने छैन।
ब्रिजरटनमा नयाँ अनुहारहरू?
यो जीवन आफैं हो, केहि छुट्टिन्छन् र अरु बल प्रयोग गर्छन्। ठीक छ, ब्रिजरटन्समा यो पनि फरक हुने थिएन। यद्यपि, रेग जीन पृष्ठ कास्टमा छैन, साइमन एशले आइपुगे। यस्तो देखिन्छ कि यो एन्थोनीको नयाँ प्रेम हुनेछ, जुन परिवारको जेठो छोरो हो। अवश्य पनि, यो कथा धेरै भावना र रोमान्स, साथै शक्ति संग पुनः आउँछ जस्तो देखिन्छ। तर यो सत्य हो कि नाटक पनि पहिले जस्तो कहिल्यै देखिएको छैन। विस्फोटक मिश्रण भन्दा बढी जुन हामीलाई थोरै पूर्वावलोकनको लागि अधिक र अधिक चाहिन्छ। यो मानिन्छ कि बाँकी सबै पात्रहरू, सबैभन्दा मनपर्दो परिवारका, हामीसँग अझै एक मौसम जारी रहन्छन्। तर यो सत्य हो कि पूर्ण रूपमा निश्चित हुनुपर्दछ, हामीले अझै पर्खिरहनु पर्छ।
हो, हामी धेरै जिद्दी गर्दछौं, तर यो यो हो कि उहाँ वास्तवमै मुख्य चरित्र हुनुहुन्थ्यो र किनकि यो सफलतापूर्वक क्रममा सफल हुँदैन, सामाजिक नेटवर्क अभिनेता मा बदलिएको छ। त्यसकारण, इन्स्टाग्राममा हामीले देख्यौं कि कसरी ड्युक आफैले आफ्नो महान सफलतालाई बिदाइ गरे। यस्तो देखिन्छ कि उसले केवल एक सीजनको लागि हस्ताक्षर गरिसकेका छ र त्यस्तै उनी भाग लिने छैनन, तर उनीसँग सँधै राम्रो शब्दहरू छन् आफ्नो टीमका साथीहरू र महान कार्यका लागि जसले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्‍यो। के तपाइँ दोस्रो सत्रमा हुन चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » ब्रिजरटन्स: दुई सीजन अब पुष्टि भयो!
कसरी डम्बेल पट्टी सहि तरिकाले गर्ने